Nepali Christian Bible Study Resources - महान् महापुजाहारी (क्रमश:)
» अध्ययन मालाहरू » यूहन्नाको सुसमाचार » यूहन्ना १७ (भाग २)
महान् महापुजाहारी (क्रमश:)
यूहन्ना १७:१४ र १६ अनुसार संसारका मानिसहरू दुई समूहमा विभाजित छन्:
१) बहुसंख्यक समूह
उनीहरू “संसारका हुन्”
उनीहरू संसारको व्यवस्थामुनि छन् (शैतानको व्यवस्था)
२) अल्पसंख्यक समूह
उनीहरू “यस संसारका होइनन्”
उनीहरू मुक्तिदाताका हुन्
ख्रीष्टका चेलाहरू संसारमा छन् तर तिनीहरू संसाका होइनन् (तिनीहरू परमेश्वरका हुन्)। मुक्ति नपाएका मानिसहरू संसारमा छन् र साथै संसारकै हुन् (उनीहरू शैतानको व्यवस्थामुनि छन् –एफेसी २:१-३ पढ्नुहोस्)।
एउटा विश्वासी जनलाई यस्तो विचार आउन सक्छ: “परमेश्वरले किन मलाई यस संसारबाट लैजानुहुन्न? परमेश्वरले मानिसहरूलाई बचाउने काम तुरुन्तै गरेर उनीहरूलाई तुरुन्तै स्वर्गमा किन लैजानुहुन्न?”परमेश्वरले त्यो चाìq;नुहुन्न! संसारमै विश्वासी जनहरूलाई छोडिराख्‍नुमा परमेश्वरको योजना र उद्देश्य छ!
यूहन्ना १७:१५ अनुसार येशूले के प्रार्थना गर्नुभएन? ______________________________________________। तर उहाँले योचाहिँ प्रार्थना गर्नुभयो, “तर तिनीहरूलाई _______बाट रक्षा गर्नुहोस्”(यूहन्ना १७:१५)। यूहन्ना १७:१५ मा “दुष्ट”भनेर रूपान्तर गरिएको शब्दको अर्थ ग्रीकमा “दुष्ट व्यक्ति वा त्यो दुष्ट”भन्ने बुझिन्छ। यसले शैतानलाई जनाउँछ। हामी संसारमै भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ तर त्यो दुष्टको नियन्त्रणमुनि होइन। हामी युद्धभूमिमै भएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, तर उहाँले हामीलाई शत्रुको हातदेखि जोगाउनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई शैतानदेखि यति सुरक्षित राख्‍नुहुन्छ कि उसले हामीलाई छुन सक्दैन (१ यूहन्ना ५:१८ पढ्नुहोस्)।
हो, विश्वासी जनहरू संसारमा छन्। आफ्ना विश्वासी जनहरूले संसारमा के गरेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ (फिलिप्पी २:१५ले आखिरी भागमा हेर्नुहोस्)? _____________________________________। स्कूलमा, छिमेकमा वा काम गर्ने ठाउँमा कतिपटक सजिलो नहोला, तर त्यही ठाउँमा तपाईं हुनुभएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, त्यहीँ नै तपाईं ज्योतिझैं चम्कनुभएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ! रात जति अन्धकार हुन्छ त्यति नै चम्किला हुन्छन् ताराहरू! यूसुफ मिश्रको अन्धकारमा थिए। मूर्तिपूजा र झूटा धर्मको बीचैमा थिए। के परमेश्वरले उनलाई सुरक्षा दिन सक्नुभयो? ____________। दनियल बेबिलोनको अन्धकारमा थिए। पापपूर्ण समाजको बीचैमा थिए। के परमेश्वरले उनलाई त्यहाँ सुरक्षा दिन सक्नुभयो? ____________। हामीले चम्कने काम गर्नुपर्छ, परमेश्वरले सुरक्षा दिने काम गर्नुहुन्छ!
आफ्ना चेलाहरूका निम्ति प्रार्थना गर्नुहुँदा येशूले परमेश्वर पितासित प्रार्थना गर्नुभएको पहिलो कुरा यो थियो, “तिनीहरूलाई रक्षा गर्नुहोस्!”(यूहन्ना १७:११-१५)। प्रार्थनामा उहाँको दोस्रो माग यूहन्ना १७:१७ मा पाइन्छ, “तिनीहरूलाई ___________पार्नुहोस्!”“तिनीहरूलाई पवित्र पार्नुहोस्”को खास अर्थ के हो? यसको अर्थ हो “तिनीहरूलाई अलग गर्नुहोस्, तिनीहरूलाई पवित्र बनाउनुहोस्, तिनीहरूलाई पवित्र जनहरू झैं बनाउनुहोस्”। संसारमा रहिरहेका आफ्ना विश्वासी जनहरूका निम्ति परमेश्वर के चाहनुहुन्छ? उनीहरू पवित्र भएको चाहनुहुन्छ! येशूले प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, पिताले उहाँका जनहरूलाई विचारमा, बोलीमा र व्यवहारमा झन् पवित्र, झन् शुद्ध (झन् झन् ख्रीष्टजस्तै) बनाइदिनुभएकोहोस्। आफ्ना चेलाहरूलाई रक्षा गरिएको ("तिनीहरूलाई रक्षा गर्नुहोस्") येशू चाहनुहुन्थ्यो र साथै आफ्ना चेलाहरूले पवित्र जीवन बिताएको उहाँ चाहनुहुन्थ्यो (“तिनीहरूलाई पवित्र पार्नुहोस्”)। ख्रीष्टले आफ्ना जनहरूको पवित्रतालाई महत्त्वपूर्ण ठान्नुभयो।
विश्वासी जनहरूको सुरक्षा र पवित्रता दुवैको आवश्यकता पर्छ। संसारमा सुरक्षित राखिएको तर पवित्र जीवन नबिताउने विश्वासी जन त एउटा अंधकारलेठामा जलेको चीमजस्तै हो। चीम त छ त्यहाँ तर त्यसले गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छैन!
परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई कसरी पवित्र बनाउनुहुन्छ? उहाँले यो काम बाइबलद्वारा गर्नुहुन्छ: “तपाईंको ________द्वारा तिनीहरूलाई पवित्र पार्नुहोस्; तपाईंको ___________सत्य हो (यूहन्ना १७:१७)।”परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गर्नेहरू, त्यसलाई पढ्ने, पालन गर्ने, त्यसद्वारा जिउनेहरू नै ती हुन् जसका जीवनहरू पवित्र हुन्छन्। “पवित्र”जन त्यो हो जसले परमेश्वरको वचनलाई आफ्नो जीवनमा काममा लाउँछ। पवित्र बाइबलले पवित्र जीवन बनाउँछ।
आज धेरैजनाले बाइबललाई खासै विश्वास गर्दैनन्। बाइबल थुप्रै त्रुटिहरू र गल्तिहरूले भरिएका छन् भनी उनीहरू विश्वास गर्छन् र बाइबलमालेखिएका धेरै कुराहरू साँचो होइनन् भनेर उनीहरू सोच्छन्। तर हामीले कहिल्यै नबिर्सौं, परमेश्वरको पुत्रले भन्नुभयो, “तपाईंको वचन _________हो”(यूहन्ना १७:१७)! परमेश्वरको वचन सत्य हो! येशूले यो भन्नुभयो, यही यथेष्ट छ! निश्चय, येशू ख्रीष्टलाई भन्दा अरू कसैलाई बाइबलको बढी ज्ञान छैन! कसैलाई बाइबल सत्य छ भनेर तपाईं कसरी प्रमाण दिन सक्नुहन्छ? सबभन्दा राम्रो प्रमाणस्वरूप बाइबलले कसरी तपाईंको जीवनलाई परिवर्तन गर्‍यो भनेर देखाइदिनुहोस्! परमेश्वरको वचनले कसरी तपाईंलाई भिन्नै व्यक्ति बनायो भनेर देखाइदिनुहोस्! परिवर्तित जीवनको खण्डन कसले गर्न सक्छ र?
नास्तिक र खनक
नास्तिक वक्ता चलाख छन् भनी सबैले स्वीकार गर्थे। वाद-विवादमा जतिसुकै चलाख प्रतिपक्षलाई समेत मूर्ख बनाउन उनले सक्थे।
तर “परमेश्वर ठट्टामा उडाइनुहुन्न”। शैतानको यस दूतलाई शर्ममा पार्नलाई उहाँले आफ्नामध्ये एउटालाई साँचिराख्‍नुभएको थियो।
एक रात एउटा धनाढ्य खानी नगरमा उक्त नास्तिकले भाषण दिने क्रममा उनले एउटा तल्लीन श्रोतालाई ख्याल गरे। खनकले लाउने खस्रो, मैलो लुगा अझै लगाइराखेका थिए अनि उनको भिमकाय शरीर र छिपाउनै नसकिने मांशपेशीहरूले उनी असाधारण शारीरिक बल भएका मानिस हुन् भन्ने प्रस्टै देखिन्थ्यो। आफ्नो भाषणलाई टुंग्याउँदै उनले भने, “अब म निश्चित छु, येशू ख्रीष्टको धर्म भनेर चिनिने किंवदन्तीलाई उजागर गर्दै त्यसका खास तथ्यहरू के-के हुन् ती तपाईंहरूलाई प्रस्ट्याउन म सफल भएको छु।”
उक्त नास्तिकले बोल्न भ्याउँदा नभ्याउँदै त्यस खनक बिस्तारै आफ्नो खुट्टामा उभिए। “महोदय”, उनले भने, “म एउटा मजदूर मात्र हुँ र “किंवदन्ती” भनेको के हो म जान्दिनँ। तर यी मानिसहरू मलाई जान्दछन्! उनीहरू जान्दछन्, तीन वर्ष अगाडिसम्म म यस नगरको सबभन्दा ठूलो गुण्डा थिएँ। मेरो घर, परिवार नरकीय थियो। मैले मेरा पत्‍नी र छोराछोरीहरूलाई बेवास्ता गरें। मेरो मुख श्राप र तीता कुराहरूले भरिएको थियो अनि तलबको सबै पैसा रक्सी पिएर सक्थें। मलाई सामना गर्ने जोकोहीले पनि मेरो मुक्काको स्वाद पाउँथ्यो। तब एकजना आएर मलाई दरिद्र पापीहरूका लागि परमेश्वरको प्रेमको बारेमा बताए। उनले मलाई म जस्तो नीच पापीको लागि कलवरी क्रूसमा मर्नुभएको ख्रीष्ट येशूको एक झलक दिए। आज तपाईंले इन्कार गर्नुभएको कुराहरूलाई नै मैले विश्वास गरें, अनि मुक्तिदाताको रगतमा भएको शुद्ध पार्ने शक्तिले मेरो यस नयाँ भरोसाद्वारा मेरो जीवन बदलियो। यी मानिसहरूले बताउन सक्छन् अब सब थोक बदलिएका छन् भनेर। बाइबल आज पनि जीवित परमेश्वरको वचन हो। येशू ख्रीष्ट कंवदन्ती हुनुहुन्न। अनि सुसमाचार चाहिँ आज पनि “विश्वास गर्ने हरेकका लागि परमेश्वरको सामर्थ्य हो” (रोमी १:१६)।
ख्रीष्टलाई संसारमा कसले पठाउनुभएको हो (यूहन्ना १७:१८)? ________________। चेलाहरूलाई संसारमा कसले पठाउनुभएको हो (यूहन्ना १७:१८)? ________________। ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई युद्धभूमिकै बीचमा (शत्रुकै इलाकाभित्र) पठाउनुहुन्छ! तर उहाँका चेलाहरू डराउनुपर्दैन किनकि विजय उहाँकै हो!
यूहन्ना १७:१९ मा येशूले भन्नुभयो, “म आफूलाई तिनीहरूका निम्ति _______पार्छु।”यसको अर्थ हो, मैले आफूलाई अलग पार्छु।”यहाँ येशूले हाम्रो निम्ति क्रूसमा गरिदिनुहुने कार्यलाई जनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बलिदानको रूपमा अथवा एउटा पापबलिको रूपमा अलग गरिनेवाला हुनुहुन्थ्यो। हामी पवित्र पारियोस् भनेर उहाँ पवित्र पारिनुभयो (यूहन्ना १७:१९)। मानिसहरूलाई पवित्र पार्न उहाँ मर्नुभयो (तीतस २:१४)।
येशू भावी विश्वासी जनहरूका लागि प्रार्थना गर्नुभयो
येशूले यूहन्ना १७ मा यस महान् प्रार्थना गर्नुहुँदा, उहाँले उहाँका चेलाहरूको त्यस सानो झुण्डको मात्र विचार गरिरहनुभएको थिएन। भविष्यमा उहाँलाई विश्वास गर्ने हजारौं मानिसहरू पनि हुनेछन् भनी उहाँ जान्नुहुन्थ्यो। यूहन्ना १७:२० मा येशूले भन्नुभयो, “म तिनीहरूका लागि मात्र प्रार्थना गर्दिनँ, तर उनीहरूका लागि पनि गर्दछु जसले तिनीहरू (चेलाहरू)ले वचनद्वारा ममाथि ___________गर्नेछन्।”
शुरूका चेलाहरू (जस्तै; पत्रुस, यूहन्ना अनि पछिबाट पावल) ख्रीष्टको बौरिउठाइ पछि निस्केर गए र जताततै मुक्तिको सुसमाचारको प्रचार गरे (मर्कूस १६:१५,२०)। उनीहरूको वचनद्वारा र उनीहरूको प्रचारद्वारा धेरैले ख्रीष्टमाथि विश्वास गरे। पछिबाट परमेश्वरले यी मानिसहरूलाई नयाँ नियमका पुस्तकहरूलेखाउन प्रयोग गर्नुभयो। नयाँ नियमलेखिएदेखि यता हजारौं मानिसहरूले यी पुस्तकहरूलाई पढेर ख्रीष्टमा विश्वास गरेका छन्। यी मानिसहरूले एक दिन उहाँमा विश्वास गर्नेछन् भनी येशू जान्नुहुन्थ्यो र त्यसैले उहाँले उनीहरूलाई समेत आफ्नो प्रार्थनामा उल्लेख गर्नुभयो (यूहन्ना १७:२०)। के तपाईंले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुभएको छ? नयाँ नियमका पन्नाहरूमा प्रस्तुत गरिएको मुक्ति सन्देशलाई तपाईंले विश्वास गर्नुभयो? यदि गर्नुभएको छ भने यो जान्नु तपाईंको लागि उत्साहपूर्ण हुनुपर्छ कि जब येशूले यूहन्ना १७ले प्रार्थना गर्नुभयो, उहाँले तपाईंको समेत विचार गर्दैहुनुहुन्थयो!
उहाँका विश्वासी जनहरू एक होऊन् भनेर येशूले प्रार्थना गर्नुभयो (यूहन्ना १७:२१-२३)। एफेसी ४:३-७ पढ्नुहोस्। त्यहाँ कतिपटक “एउटै”भन्ने शब्द उल्लेख छ? _________। के येशूको प्रार्थनाको जवाफ मिल्यो? _________। आज मानिसहरूले जब ख्रीष्टमा विश्वास गर्दछन्, त्यतिखेर उनीहरू सबै “__________शरीरभित्र बप्‍तिस्मा”हुन्छन् (१ कोरिन्थी १२:१३)। यसको अर्थ हो, प्रत्येक विश्वासी जन ख्रीष्टको शरीरमा गाभिन्छन्, जोचाहिँ मण्डली हो। प्रत्येक विश्वासी मण्डलीको अंग बन्दछ! विश्वासीहरू भएर हामी सबैले एउटा साझा एकताको भागीदार हुन्छौं। प्रत्येक विश्वासी जनले यसरी भन्न सक्दछ:
पवित्र आत्मा मभित्र जिउनुहुन्छ
परमेश्वर मेरा पिता हुनुहुन्छ
ख्रीष्ट मेरा मुक्तिदाता र शिर हुनुहुन्छ
पवित्र आत्मा मेरो शान्तिदाता हुनुहुन्छ
ख्रीष्टको आगमन मेरो आशा (निश्चयता) हो
स्वर्ग मेरो घर हो!
मुक्ति नपाएकाहरूले यी कुराहरू भन्न सक्दैनन् अनि हामी उनीहरूसँग एक छैनौं।
उहाँका विश्वासी जनहरू उहाँसँगै स्वर्गमा होऊन् भन्ने के येशूले चाहना गर्नुहुन्छ (यूहन्ना १७:२४)? ____________। के उहाँ हामीलाई त्यहाँ लैजान फेरि आउनुहुनेछ (यूहन्ना १४:३)? ______________। हामीले के देखेको येशू चाहनुहुन्छ (यूहन्ना १७:२४)? ___________________। स्वर्गमा, येशू नै सबैको ध्यानको केन्द्र हुनुहुनेछ! आज विश्वासी जनहरू येशूलाई नदेखे तापनि आनन्द मनाउँदछन् (१ पत्रुस १:८)? ______________। आज उहाँलाई नदेखेर समेत आनन्द मनाउँदछन् भने, विचार गर्नुहोस् त, भविष्यमा उहाँलाई आमने सामने देखेर उनीहरू कति आनन्द मनाउँनेछन् होला! एउटा केटीको विचार गर्नुहोस् जसलाई मगनी गर्ने केटा टाढामा छ। उनीबाट चिठ्ठी पाएर त्यस केटी खुशी हुन्छिन् कि हुँदिनन्? ___________। उनले फोन गरे भने उनी खुशी हुँदिनन् र? झन् उनी उनलाई आमने सामने भेट्न आए भने नि! चिठ्ठी र फोनभन्दा यो नै बढी उत्तम हुनेछ, होइन र?
प्रभुको प्रार्थना पद २६ मा टुंगिन्छ। तर बास्तवमा विश्वासी जनहरूका लागि उहाँको प्रार्थना कहिल्यै टुंगिदैन! बाइबलले भन्दछ, “तिनीहरूका निम्ति अन्तर्विन्ती गर्न उहाँ _______जीवित रहनुहुन्छ”(हिब्रू ७:२५)। उहाँ हाम्रो निम्ति प्रार्थना गर्न कहिल्यै छाड्नुहुन्न! हाम्रा मुक्तिदाताले हामीलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ र आफ्ना विश्वासी जनहरूको कति वास्ता गर्नुहुन्छ भनेर हामीले जानोस् भनेर परमेश्वरले हामीलाई यूहन्ना १७ले यस प्रार्थनालाई “सुन्न”दिनुहुन्छ!
कति महान् मुक्तिदाता!
कति महान् महापूजाहारी!
« महान् महापुजाहारी
परमेश्वरका थुमा (भाग १) »